Madda Walaabuu Press: Gaddii du’a Gooticha Jaarraa Abbaa Gadaatiin uumame QBOtiif carraa gaariitti jijjiiramuu qaba
Gootichi keenya Obboo Jaarraa Abbaa Gadaa, galii qabsoo bilisummaa Oromoo isa booddee yoo arguu baatanis, jireenya isaaniitiin firii qabsoo isaan umurii isaanii itti fixan arganii jiru. Isa kana keessaa inni tokko, Afaan Oromoo kan yeroo isaan qabsoo kana eegalan raadiyoonii cabsa jedhamee tuffatame sun har’a kunoo sadarkaa kanarra gayuu isaa ti. Kun fakkeenyota baay’ee keessaa isa tokkoo dha. Bakkee barbaadame gayuu baatus qabsoon isaan jalqabani fi gaggeessaa asiin gayan bu’aalee baay’ee argamsiisee jira. Dhalootni har’aa fi kan boruu ammoo qabsoo kana cimsanii itti fufuudhaan waan hafe bakkeen (galiin) gayuu qabu. Dhumarratti, gadda natti dhagayame irra deebi’ee ibsaa; Waaqayyo/Rabbi lubbuu gooticha fi sooressa keenyaa jannata haa seensisu; maatii fi firoota isaaniitiif ammoo jabeenya haa kennu. Gootichi keenya Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa saba Oromoo keessatti bakkee guddoo argatu. Qabsaa’an ni kufa, qabsoon itti fufa; bilisummaan Oromiyaa dhiiga ijoollee ishiitiin dhufa!